Allgedo.com » Mahiga oo la mid noqday gorayo gabal u dhacay! By Daahir Faarax Afdheere
Mahiga oo la mid noqday gorayo gabal u dhacay! By Daahir Faarax Afdheere
Ergayga Qaramada Midoobay u fadhiya Soomaaliya Agustine Mahiga ayaa mar qura shib yiri oo warkiisana la waayay, kadib markii Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu doorashada ku guuleystay 10 bishii Sebtember ina dhaaftay.
Mahiga ayaa waxaa uu kal hore ahaa ninka majaraha u hayay Dawladdii musuqmaasuqa ku dhisnayd ee ay horboodi jireen labada Shariif ee nahaabiinta ah! kuwaasoo ku socday hadba wixii uu u meeriyo.
Agustine Mahiga ayaa waxaa uu horey u helay rag aan aqoon iyo afqalaad toona lahayn waa laba Shariife, kuwaas oo ka dhaadhicin jiray in beesha caalamku ay mucaawimada goosanayso haddii aan la yeelin waxa uu isagu rabo.
Maalmihii doorashada socotay iyo maalmihii ka dambeeyay ee la waday hawsha ah magaacibidda Ra’isulwasaaraha, Mahiga wuxuu geed dheer iyo mid gaabanba u fuulay in mar kale ay amaawiirtiisu Soomaaliya ka dhaqan galaan, isla markaanna uu meel mariyo rabitaankiisa ku wajahan ciddii qaban lahayd majaraha siyaasadda ee Soomaaliya, taasoo uu ku hungoobay.
Marka laga reebo Gaas oo ay inta badan isku xulufo ahaayeen oo ay isku dan iyo siyaasadba ahaayeen ka sakoow, waxaa Mahiga uu labada shariif dhegaha ugu shubi jiray oo ka dhaadhicin jiray in aanay marnaba waxba socanayn, haddii aan la tix gelin Doonistiisa iyo himiladiisa sare ee ku dhisan Musuq-maasuqa iyo caddaalad-xumada.
Tobankii bishii Sebtember waxay Mahiga ula mid ahayd dharaar uu cirku ku soo dumay oo uu la mid noqday Gorayadii uu gabalku u dhacay, maxaa yeelay waxaa doorasha ku guuleystay Madaxweyne aqoon sare leh, beesha caalamkana isaga toos ula macaamili kara ee aan marnaba Mahiga u daba fadhin, Madaxweyne la socda caalamka iyo waxa ka jira ee aan marnaba Mahiga wax ka weydiinayn.
Markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh ayuu Mahiga mar kale haddana isa soo maqiiqay, isagoo doonayo inuu bal markaanna meel mariyo rabitaankiisa ku wajahan qofka noqonayo Ra’isul-wasaaraha Soomaaliya, hasa yeeshee Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaashaanka u daruuray.
Haatan Mahiga wuxuu ku koobmay hawshiisa ah in uu yahay wakiil ka socda Qaramada midoobay oo Soomaaliya joogga oo edeb leh, halka ay mar hore dad fara badan u haysteen inuuba yahay Madaxweynaha dhabta ah ee Soomaaliya.
Waxba waxbaa kasii darane! Mahiga wuxuu mar kale calankiisa dhacay, kadib, markii Ra’isul-wasaare loo magacaabay Dr. Saacid Faarax Shirdon oo isuguna ah aqoon yahan wax weyn kala socda siyaasadda Soomaaliya iyo caalamkaba, kaasoo mar kasta iskala weyn in uu Mahiga wax weydiiyo ama u hoggaan samo amaawiirtiisa gurracan.
Isku soo wada duuboo, waxaa haatan Soomaaliya ay yeelatay Madaxweyne iyo Ra’isulwasaare iyo Guddoomiye Baarlamaan oo intuba aqoon fiican u leh Siyaasaadda Soomaaliya iyo tan caalamkaba, kuwaasoo aanay marnaba macquul ahayn in ay Mahiga wax badan ka haybaystaan, taasoo haatan Agustine Mahiga ka dhigaysa inuu la mid noqdo Gorayo gabal u dhacay!.